Xoghaye Bayram Ayaa Sameeyay Tram Ganacsiyo Fudud | RayHaber | raillynews
HometareenkaXoghayaha Guud ee Bayradu wuxuu fududeeyay shaqooyinka tufaaxa
15 / 10 / 2017 tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, TURKEY, taraamka
Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli İlhan Bayram ayaa la kulantay dukaameeyaha Bekirpaşa quraacda. Kuxigeenka Xoghayaha Guud İlhan Bayram, Kuxigeenka Xoghayaha Guud Mustafa Altay, Isuduwaha Guud ee Dowladaha Hoose Veysel Özkaraaslan, Lataliyaha Duqa Magaalada Ömer Polat, Mehmet Ali Paşa Neighborhood Headman Yaşar Doğan, ganacsato badan oo xaafadaha ah ayaa kaqeybgalay shirkii ka dhacay maqaayadda xaafada.
Wadooyinkayaga waxaad ka dhigtay mid gaboobay
Cali Yilmaz wuxuu qabanqaabiyey shir ku saabsan xirfadaha xaafadaha, Cali Yilmaz wuxuu u hadlay sidii gobol ahaan. Yılmaz wuxuu uga mahadceliyey Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli Magaaladiisa ”Sida Dukaanleyaasha Mehmet Ali Pasha Neighborhood Bagdat Street, 6-7 ayaa ku lumay dariiqayaga hal jid sababtoo ah wadada tareenka bilo kahor. iyo Duqa Magaalada. "Waxa uu sheegay.
Goor dambe, Mehmet Ali Pasha, oo ah madaxa xaafada Yasar Dogan ayaa yiri tan soo socota. Dogan, adına waa inaan ku xasuusiyaa wax anaga oo matalaya xaafadeena. Sannado kadib, waxaan xaafaddeena ku leenahay olole aad u dhameystiran. Ilaa laamiga iyo dhismeedka wadooyinka tareenka, shaqooyinka muuqda ayaa la qabanayaa. Waxaan runtii ugu mahadcelineynaa Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli. Markii ugu horreysay, mashruuc biyo-biyood roobaadka ayaa laga fuliyaa xaafaddeena. "Waxa uu sheegay.
DHAMMAAN DHAMMAAN WAA MUHIIM U AH Mareykanka
Kadib, Xoghayaha Guud İlhan Bayram ayaa yidhi, sonra Kadib markii aan noqday Xoghayaha Guud ee Dawlada Hoose, waxaan abaabulnaa kulankeena ugu horeeya ee ganacsiga halkan maanta. Shaqadayadu waa inaanu kuu adeegno. Dhibaatadayadu waa inaan u adeegno dalkeena. Inta aad waxan sameyneyso, dabcan, aad ayey muhiim u tahay inaad adiga ku soo wada raacdid oo aad fikradahaaga heshid. Xaafadda Mehmet Ali Pasha sidoo kale meel gaar ah ayey noo leedahay. Degmo kasta anaga ayaa muhiim noo ah. Degaankeenna ayaa isku beddelaya mashaariicda aan hadda sameyno. Tareenkayaga waa halkaan. Hadda waxaa yimid aaggayaga suuqayada xiran. Tareenkayagu wuxuu gaarayaa 30 kun oo rakaab ah maalintii. Taas macnaheedu waa in maalgashiyadeenu sax yihiin. Waxay ka dhigtay inay shaqadaada ku fududaan tram. Gaadiidka magaalada gudaheeda ayaa la dejiyay. Waxay sidoo kale siisay aragti qurux badan magaalada. ”
Bayram wuxuu sii watay ereyadiisa sida soo socota: “Kuuma imaan doonno hal mar uun ka dibna waan joojin doonnaa. Dhamaanteen waan wada joognaa. Waqti ayaan isla qaadaneynaa. Waxaad arki doontaa waxyaabo badan oo qurux badan oo la soo saari doono. Waxaan isku dayeynaa inaan caawino dadkeena waxbadan. Kuuma nihin adigu, waxaan ku leenahay saaxiibo idinku tababbara. Ka dib oo dhan, waxaan ahay wiil tuulo ah, waan kula jirnaa. Muwaadinku fikir ka duwan kama haysano muwaadinku. Markasta waan kula joognaa, markasta waxaan noqon doonnaa midnimo. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo ganacsadeheenna soo booqashadaada maanta. "Waxa uu sheegay.
Imtixaankii Xoghayaha Guud ee Bayriga oo ku yaal Khadka Akkaray
Xoghayaha Guud ee Bayaan, wuxuu kudhacay Idaacad ku taal Akxaray
Xoghayaha Guud ee Kobanheegan wuxuu sheegaa Shaqada Taraafiga
Xoghayaha Guud Gokce, 'Model Model' ayaa u sheegay Gaziantep
Izmit Bars Street Tradesman Nevzat Dogan Iskuday
Tusaale: ilhan bayram
Kantaroolka Tareenka Kocaeli
Mehmet Ali Paşa Degaanka
Ka dib markii gaari ku dhuftay tareenka Samsun ...
Internetka Abaalmarinta Waxyaabaha la siiyay IETT